ဘူးသီးတောင်- မောင်တောသွားလမ်းမပေါ်၌ မိုင်းထောင်နေသူတစ်ဦး ဖမ်းဆီးရမိ ~ Myanmar Online News
ဘူးသီးတောင်- မောင်တောသွားလမ်းမပေါ်၌ မိုင်းထောင်နေသူတစ်ဦး ဖမ်းဆီးရမိ
4:35 AM ပြည်တွင်းသတင်း No comments
မောင်တောမြို့နယ်အတွင်း ဘူးသီးတောင်- မောင်တောသွားလမ်းမပေါ်၌ မိုင်းထောင်နေသူတစ်ဦး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်အတွင်း လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေသော တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် မတ် ၂၅ ရက် ည ၇ နာရီ မိနစ် ၅၀ ခန့်တွင် မောင်တောမြို့၏ အရှေ့ဘက် မီတာ ၆၀၀၀ ခန့်အကွာသို့ အရောက် ဘူးသီးတောင်-မောင်တောသွား လမ်းမပေါ်၌ အမျိုးသား နှစ်ဦး၊ အမျိုးသမီး တစ်ဦးတို့မှာ ဆိုင်ကယ်နှစ်စီးအားရပ်တန့်၍ မိုင်းထောင် နေသည်ကို တွေ့ရှိသဖြင့် လိုက်လံဖမ်းဆီးရာ မောင်တောမြို့၊ အမှတ် (၃)ရပ်ကွက်နေ ညီညီနိုင်(ဘ) ဦးငွေစိန် အား ဆိုင်ကယ်တစ်စီး၊ အလျား ၈ လက်မ၊ အနံ ၅ လက္မ၊ ထု ၂ လက်မခွဲခန့်ရှိ ရှေ့ထွက်မိုင်း တစ်လုံး၊ ကော်ပိုက်ဖြင့် ပြုလုပ် ထားသော အမြင့် ၈ လက်မ၊ လုံးပတ် ၈ လက်မခန့်ရှိ ဒေသန္တရလက်လုပ်မိုင်း တစ်လုံး၊ ဓားတစ် ချောင်းတို့နှင့်အတူ ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဖမ်းဆီး ရမိသူနှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းများအား သက်ဆိုင်ရာသို့ စနစ်တကျ လွှဲပြောင်းအပ်နှံသွား မည်ဖြစ် ကြောင်းနှင့် ၎င်းနေရာ တစ်ဝိုက်အား လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ ဝင်များက လိုအပ်သည့်လုံခြုံရေးလုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
မန္တလေးအခြေစိုက် VOM သတင်းဌာနမှ အယ်ဒီတာချုပ်ကို အက...
ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူမျာကြောင့် Coronavirus ရောဂါ ကူးစက...
KIA အဖွဲ့မှထောင်ထားသည့် တိုက်မိုင်းတစ်လုံးတိုက်မိ ...
တပ်မတော်မှ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ Coronavi...
COVID-19 ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ(၁)ဦး သေဆုံးမှုနှင့်ပတ်...
ပဲခူးတိုင်း အုတ်တွင်းမြို့တွင် လောက်ကိုင်မှပြန်လာသ...
ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်မှ ပြန်ဝင်လာမည့် မြန်မာနိုင်ငံသ...
စပိန်ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်ဌာန အကြီးအကဲ ကိုရိုနာဗိုင်း...
COVID-19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှု ထိန်းချုပ်နိုင...
CIDအဖွဲ့မှဟုပြောဆိုကာ Voice Of Myanmar သတင်းဌာန၏ အ...
ဝေဘာဂီဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေသော COVID 19 လူနာအ...
COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု ထိန်းချုပ်သည့်အနေဖြင...
ကမ္ဘာကပ်ရောဂါ Covid-19 ကြောင့် အီရန်၊ စပိန်နဲ့ ဂျာ...
Covid-19 ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်း တောင်ငူက ရ...
မောင်တောမြို့နယ်၌ ARSA အဖွဲ့က ဆွဲမိုင်းတစ်လုံးဖောက...
Covid-19 တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂက မြန်မာကို ပို...
Covid-19 ဗိုင်းရပ်စ် အရေးတော်ပုံကို တာဝန်သိပြည်သူတ...
Covid-19 အတည်ပြုလူနာ (၁၄) ၏ ခရီးသွားလာမှု မှတ်တမ်း...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် Covid-19 လူနာ(၁၄)ဦး တွေ့ရှိထားပြ...
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘက်မှပြန်လာသော ပြည်တော်ပြန်တစ်ဦး မကွ...
COVID-19 ကို ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရန်အတွက် ထိုင်းနိုင်င...
COVID-19 နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းများကို အချိန်နှင့်တပ...
Covid-19 ကာကွယ်ရေးအတွက် မင်းလှမြို့၌ ပြည်တော်ပြန်မ...
မြိတ်မြို့သို့ နိုင်ငံခြားသား (၄)ဦး ယနေ့ ရန်ကုန်မှ...
နယ်စပ်မှ ဖြတ်သန်းဝင်ရောက်လာသည့် အလုပ်သမားများထဲမှ ...
အမြန်လမ်းတွင် လုယက်မှုကျူးလွန်သူများကို ဖော်ထုတ် ဖ...
AA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူ အဖွဲ့များ ထံသို့ ရိက္ခာ...
COVID-19နှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူများသိချင်တဲ့ မေးခွန...
COVID-19 ထပ်တိုးလူနာတွေ့ရှိသည့် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မ...
COVID-19 ကာကွယ်ရေးအထောက်အကူ ဖြစ်စေရန်အတွက် တိုင်းစ...
Covid -19 စတင်ဖြစ်ပွားသော တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့တ...
COVID-19 တိုက်ဖျက်နေချိန် ကိုယ်လုပ်တော်များနှင့် ဂ...
Covid -19 ကူးစက်ဘေးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ဆေးဘက်အဖွဲ့ န...
Covid -19 အတည်ပြုလူနာ အများဆုံးဖြစ်နေသော ရန်ကုန်မြ...
Covid-19 ဖြစ်ပွားမှုထိန်းချုပ်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်...
Covid - 19 ကြောင့် ရုရှားတွင် ပင်လယ်နက် အပန်းဖြေစခ...
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဂျာမန်ဒေသဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရ...
ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်) BPI မှ လက်သန့်ဆေးရည်နှင့် အ...
ဆမီးမှသယ်လာသော ဆန်အိတ်များအား AA အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိ...
Covid-19 ကူးစက်ပျံ့ပွားမှု မဖြစ်စေရန်အတွက် လာအိုနိ...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် Covid-19 လူနာ (၁၀) ဦး တွေ့ရှိထား...
Covid-19 ကို ကာကွယ်ရန် သြစတြေးလျတွင် လူ(၂)ဦးထက်ပို...
Covid-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် ဆေးရုံသုံးပစ္စည်...
covid-19 ကြောင့် မရှိမဖြစ်ဝန်ထမ်းများမှအပ ဝန်ထမ်းအ...
Covid 19 ကြောင့် အခမ်းအနားပွဲများ မလုပ်ရန်ညွန်ကြား...
မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် Facility Quar...
COVID-19 ရှိမရှိ ၅ မိနစ်အတွင်း စမ်းသပ်နိုင်သည့် စက...
covid-19 စောင့်ကြည့်လူနာများကို ကုသပေးနေချိန် ဌာနဆ...
မြိတ်တွင် Covid-19 ကာကွယ်ရေး အထောက်အကူပြု ယာဉ်တစ်စ...
ယနေ့ကောင်းကင်တွင် လေထုညစ်ညမ်းမှု ဖြစ်ပေါ်နိုင်သောက...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် Covid-19 လူနာ (၈) ဦး တွေ့ရှိထားပ...
Covid - 19 ကြောင့် အီတလီနိုင်ငံတွင် သေဆုံးမှု နှုန...
Covid - 19 ကြောင့် မန္တလေးတွင် ဈေးဆိုင်များကို ရက်...
တပ်မတော်အနေဖြင့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်း မယို...
Covid 19 ကာကွယ်ဆေးထုတ်ရန် တစ်နှစ်ခွဲအထိ ကြာမြင့်နိ...
နေပြည်တော်ဟိုတယ်တခုတွင် ကုလ အရာရှိတဦး ဖျားနာနေ၍ သက...
Covid-19 လူနာအမှတ်(၈)နှင့်အတူ ပြင်သစ်ခရီးသွားအဖွဲ့...
Wave Money ဖြင့် ၁၀၀၀၀ တန် ငွေစက္ကူ အတုများဖြင့် င...
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ကိ...
Covid -19 အခြေအနေဆိုးရွားလာပါက စစ်ကိုင်းတံတားနှစ်စ...
မြိတ်မြို့ရှိ ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်များတွင် Civid -19...
ထိုင်းတွင် လူစုလူဝေးဖြင့် ပါတီပွဲကျင်းပတဲ့အဖွဲ့တွေ...
Covid-19 ကြောင့် NLD အစိုးရက လူစုလူဝေးမပြုလုပ်ရန် ...
COVID-19 လူနာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသူ လာရောက်ခဲ့သော ရှမ...
မလေးရှားနန်းတော်ဝန်ထမ်းများတွင် COVID-19 စစ်ဆေးတွေ...
COVID-19 လူနာတွေဟာ အနံ့ခံအာရုံ ဆုံးရှုံးသွားတတ်တာက...
အီတလီနိုင်ငံ မှာ တစ်ရက်တည်း COVID-19‌ ကြောင့် သေဆု...
စံပြဆေးရုံကနေ တရုတ်နိုင်ငံသားနှစ်ယောက် ကိုရိုနာဗို...
covid-19 ရောဂါလက္ခဏာတွေက လာတွေပါလဲ?
Covid - 19 ကြောင့် ရတနာပုံစျေး အထူးသတင်းကြေငြာချက်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကြောင့် အမေရိကန်မှာ အလ...
ဝန်ကြီးချုပ်အပြင် ဗြိတိန် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးပါ Covi...
မူဆယ်မြို့တွင် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား အမျိုးသား နှ...
ဓမ္မရံသီမိုးကုတ် ရိပ်သာကျောင်းတွင် ကိုရီးယားနိုင်င...
COVID-19 ကြောင့် ပြည်တွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းများအားလ...
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ပိုး တွေ့ရှိသူ တင်ဆောင်ခဲ့သည့် မီ...
Covid - 19 ရောဂါဖြစ်ပွားချိန်တွင် ဧည့်စာရင်းဥပဒေအာ...
COVID-19 ကာကွယ်ကုသရေးအတွက် သိန်းပေါင်း ၁၄,၀၀၀ ကျော...
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ယခုအခါကမ္ဘာပေါ်တွင် Covid-19...
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရှိသည့် အမှတ် ၄ လူနာ တည်းခိုသွာ...
မန္တလေးမြို့မှာ COVID-19တွေ့ရှိခဲ့သည့် အမေရိကန်နို...
အကာအကွယ်ပစ္စည်း ပြည့်စုံစွာမရှိသည့်အတွက် ဖိလစ်ပိုင...
သီတဂူဆေးရုံများ Covid-19 အတွက် စောင့်ကြည့်ဌာနအဖြစ်...
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော (၇၅)...
ဘူးသီးတောင်- မောင်တောသွားလမ်းမပေါ်၌ မိုင်းထောင်နေသ...
COVID-19ရောဂါ ကာကွယ်တားဆီးရန် တစ်နိုင်ငံလုံး ရုံး ...
ရန်ကုန်မြို့ လမ်းမတော်မြို့နယ်တွင် ဗီဇာသက်တမ်းကုန်...
ULA/AAအကြမ်းဖက်အဖွဲ့နှင့် ဆက်နွယ်သူများ၏ ငွေကြေး၊ပ...
အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်း Quarantine ကို လက်မခံပါက အရေး...